Original lesikhumba icala wayibhinca kanye metal tag Isikhumba Tote ngoba BlackBerry 8100 / 8110/8120 Pearl — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Original lesikhumba icala wayibhinca kanye metal tag Isikhumba Tote ngoba BlackBerry 8100 / 8110/8120 Pearl
Indlela enkulu ukuvikela smartphone yakho. wayibhinca Khipha wawuhlanganisa. ukuthungwa olungenakuqhathaniswa, isitayela liyabonakala futhi ezingaphelelwa isikhathi of the cover original! It isekela ubuchwepheshe magnetic. Ezahlukene ongakhetha kuzo.
Original lesikhumba icala wayibhinca kanye metal tag Isikhumba Tote ngoba BlackBerry 8100 / 8110/8120/8130 Pearl — indlela enhle kakhulu ukuvikela smartphone yakho. inkampani Case ukukhiqiza BlackBerry, oqinisekisa izinga layo kanye inhlanganisela ephelele nedivaysi.
Very design umsebenzisi-friendly: ephaketheni mpo nge jumper. Behind kulekelelwa wayibhinca esikhiphekayo on carbines, okuyinto unamathele kalula futhi isuswe, futhi uphelelise ngokuphelele ikhava. I soft engxenyeni engaphakathi ukugwema ukuzinwaya nemihuzuko, ukushaqeka ukumuncwa. bands enjoloba nokunwebeka ohlangothini ngalunye ivumele uhlelo holster ukugcina ifomu ukusetshenziswa njalo.
Once ucingo icala, it is ngokuzenzakalelayo ikhiyiwe — BlackBery sici magnetic kuzokusiza Ukulondoloza amandla ebhethri futhi ugweme ompompi ngephutha on the keyboard.
Esikhwameni Isikhumba Tote has ukuthungwa olungenakuqhathaniswa, sibonga isikhumba sakhe esithambile. design Laconic, Palette ezihloniphekayo, amafomu ugeleza line obunobunye Ngaphezu nenhle ithegi metal BlackBerry — isitayela liyabonakala futhi ezingaphelelwa isikhathi of the cover original!
Uhla emelelwa imibala emine: uma udinga Classic black version — ngawe; Isikhumba — white ayijwayelekile, uma uthanda izixazululo non-eziwubala, umbala wakho — pearl ezimhlophe; abathandi — egqamile futhi kwesibhamu ecebile ejulile ebomvu, nalo ngeke ahlale waphawuleka; soft isihlabathi beige ngokuphelele sigcwalisa ebusweni soft, umbala okunjalo kumjabulisa kakhulu iso.
Ukuze ufunde kabanzi mayelana ezihlukahlukene imibala, bheka isithombe.
Original lesikhumba icala wayibhinca kanye metal tag Isikhumba Tote ngoba BlackBerry 8100 / 8110/8120 Pearl, Black (Pitch Black) HDW-12719-001 ●
Original lesikhumba icala wayibhinca kanye metal tag Isikhumba Tote ngoba BlackBerry 8100 / 8110/8120 Pearl, White (Pearl White) HDW-12719-004 ●
Original lesikhumba icala wayibhinca kanye metal tag Isikhumba Tote ngoba BlackBerry 8100 / 8110/8120 Pearl, Beige (Ecru Tan) HDW-12719-002 ●
Original lesikhumba icala wayibhinca kanye metal tag Isikhumba Tote ngoba BlackBerry 8100 / 8110/8120 Pearl, Red (Apple Red) HDW-12719-006 ●
White (Pearl White) HDW-12719-004